Ukhenketho - iiVenkile ze-Absolut | Uhambo lwe-Absolut (Iphepha 2)
IWashington likhaya kwizakhiwo ezi-5 ezidumileyo eMelika eziye zavela kwiimovie ezininzi. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zintoni?
Kumazwe akumazantsi neMpuma yeAsia, ukusuka eIndiya ukuya eTshayina, iindlela zothutho zemveli ezibizwa ngokuba ziirickshaw zithandwa kakhulu. Uvelaphi?
Iindawo ezithandathu zeHoneymoon eMelika-Uhlobo olwaMangalisayo. Ukusuka e-Florida enelanga ukuya kwi-Hispanic California.
Ummandla wezinto zakudala waseTierradentro, eCauca
Obunye bobutyebi obukhulu bempucuko yangaphambi kweColombia eColombia ifumaneka kwiTierradentro National Archaeological Park.
I-Aeroflot inemigaqo emitsha yempahla
Funda ngemigaqo emitsha yempahla yeAeroflot, ulwazi olubaluleke kakhulu xa ubhukisha iindiza zakho kunye nokucwangcisa uhambo lwakho.
Izikhumbuzo zembali ezibaluleke kakhulu eRashiya
Izikhumbuzo zembali zaseRussia ezibaluleke kakhulu, ezizezinye zezona ndawo zindwendwelwe ngabakhenkethi kweli lizwe.
Kutheni uhamba ukuya eRoma
Ukuya eRoma yenye yezona zinto zibalaseleyo zokwenza njengoko esi sesinye sezixeko zibalaseleyo eYurophu.
Iivenkile ezi-5 ezidume kakhulu eNew York
Ukuba uya eNew York, usenokuzibuza ukuba ingaba uza nayo na ityesi engenanto xa usithenga.
Ikholoni yaseBernini eVatican
Ivaranda yaseBernini eVatican yenye yezinto ezimangalisayo zeBaroque yaseYurophu. Ifuzisela ukwamkela umhambi ngezonqulo.
Iindawo eziphambili ze-10 zabakhenkethi eIreland
Kwiindawo ezili-10 eziphambili zokutyelela e-Ireland ziindawo ezinjengeGiant's Causeway, iRing of Kerry okanye iDublin uqobo.
Ibhulorho entle yabathandi phakathi kweProvencencia kunye neSanta Catalina
I-Bridge of Lovers, edibanisa iziqithi ze-Providencia kunye ne-Santa Catalina, yeyona ndawo ifanelekileyo onokuyonwabela njengesibini.
Imephu zeBarcelona ukonwabela isixeko. Iimephu zommandla, izithili, iimephu zemetro, iimephu zebhasi yabakhenkethi, iindlela zebhayisikile zaseBarcelona, ​​iimephu ze-smartphone ...
Imifanekiso emihle njengezinye iindawo ezimbalwa, izitrato zayo ezimxinwa kunye neefacade ezindala zikumema ukuba uthathe uhambo olumnandi ukuze ufumane imbali yesixeko.
Izixeko ezikumazantsi ePeru
Izixeko ezikumazantsi ePeru ezinje ngeArequipa, iTacna okanye iPuno zikunika ilifa elityebileyo neliligolide.
IMadagascar ikunika imihlaba ephuphayo kunye neelwandle ezintle, kodwa ikwanencasa ye-gastronomy kunye nomlinganiswa ococekileyo wase-Afrika.
Sikubonisa ukuba zeziphi iilwandle ezintle kwiAsturias onokufikelela kuzo xa undwendwela ikomkhulu lobunkokheli, iOviedo.
UTocororo, intaka yesizwe yaseCuba
I-Tocororo ingaphezulu kwentaka nje: yintaka yesizwe yaseCuba. Oku kuthetha ukuba yinxalenye yeempawu zesizwe zeli lizwe.
Ezinye zezipho ezivela eVienna
Kukho izipho ezithile zaseVienna abathi bonke abahambi bathande ukuzithenga, ngokungathandabuzekiyo zithandwa kakhulu. Oku kukuthengwa kweklasikhi kwabahlobo kunye nosapho.
Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngeCueva de los Verdes eLanzarote? Namhlanje sikunika lonke olo lwazi ubulilindile. Uya kulahleka?
Kutheni le nto iHavana ibizwa njalo
Fumanisa ukuba kutheni iHavana ibizwa njalo kwaye ithetha ntoni
Imisebenzi yaseKhanada kunye neNkcubeko
Ngaba uyazi ukuba malunga nama-300 amawaka abomdabu abahlala eCanada abathetha iilwimi ezingama-58 okanye iilwimi zamaqela alishumi eelwimi ...
Iminqweno malunga ne-Angel Falls, eyona ndawo ingxangxasi kakhulu emhlabeni
Entlango yehlathi laseVenezuela kufihlwe obunye bobutyebi bendalo beli lizwe kwaye ...
Amasiko eKrisimesi eBrazil
Izithethe zeKrisimesi eBrazil ziziphumo zokudityaniswa kweenkcubeko ezenza elo lizwe laseMelika. Nge…
Yintoni ongayibona eSweden
Ukuba ufuna ukonwabela ukhenketho olugqibeleleyo, ungaphoswa yinto oza kuyibona eSweden. Kungenxa yokuba sithatha wena kwiimeko ezahlukeneyo kakhulu kodwa bonke ubuhle obukhulu.
Ilizwe laseFrance laseBasque
Ilizwe laseFrance laseBasque yintsimi egcwele imbali kunye nezikhumbuzo. Kodwa, ngaphezu kwayo yonke, yeendawo ezintle kunye ne-gastronomy egqibeleleyo.
Amabhafu obushushu eBudapest
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi ezona ndawo zidumileyo nezimangalisayo zeBudapest ezishushu endaweni? Apha sikhetha ezo ndawo ubuzilindile.
Yintoni ongayibona eLyon
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba uza kubona ntoni eLyon? Emva koko ungaphoswa lolu khenketho, ngeyona ndawo intle nelifa lemveli.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba uza kubona ntoni eAndorra? Emva koko ungaphoswa ziingongoma zentlanganiso esele sizikhankanyile. Uyilo loyilo, imbali kunye neembono zepanoramic.
ICinque Terre: Wamkelekile kweyona ndawo ibalaseleyo e-Itali
Imibala, imeko yaselwandle kunye namasiko enza iidolophu ezintlanu zaseCinque Terre, iparadesi ejonge kunxweme olusemantla e-Itali.
Imiqolomba yaseSan José yenye yezona zinto zibalulekileyo sinazo kwilizwe lethu. Uhambo lwesikhephe lonwabela amagumbi ekufuneka uyazi.
Kukho iindawo onokuzibona eMilan ngosuku olunye kwaye siza kuzikhankanya kuwe. Iindawo ezizodwa zobuhle obukhulu obungenakuphuthelwa.
Ukuba ujonge ukuchitha ikrisimesi emangazayo eyahlukileyo, ezi ndawo zibalaseleyo ziya kuba yindlela efanelekileyo yokubaleka kwiidinala zosapho.
Indlela ekuthiwa yiCistercian Route luhambo olude olusisondeza kwiindawo ezizodwa, apho uyilo ludibana ne-gastronomy nokunye okuninzi.
Iipaki zesizwe, izixeko ezinembali okanye amachibi asentsomini. Ukusuka eSlovenia ukuya eGrisi, kuninzi ukubona kwiBalkan Peninsula.
Ezona zixeko zihle zamandulo eYurophu
Ukusuka kwiengqameko zedolophu yakudala yaseBern ukuya kwiindonga zeAvila, ezi zixeko zihle kakhulu mandulo eYurophu ziya kukwenza uhambe ngexesha kunye nendawo.
Eyona spas intle eSpain
Ukuba ujonge ukuphumla kwimpelaveki ezayo, balekela kwezi spas zibalaseleyo eSpain apho intuthuzelo incediswa yimpilo engcono.
Ukuba ujonge iparadesi esemhlabeni, i-Isla de Lobos ebekwe kufutshane neFuerteventura, kwiiCanary Islands, ithembisa ngeelwandle eziyimfihlo kunye neendlela ezizodwa zokuhamba.
Yintoni omele uyenze kwaye uyenze kwiMontparnasse tower eParis
Ukuba ufuna isicwangciso esisesinye eParis, ungathandabuzi ukuya kwinqaba yaseMontparnasse kwaye ufumane ezona mbono zintle kwiSixeko soThando.
Izikhumbuzo zaseMadrid ongenakukuphosa
Ukusuka kwi-Plaza Mayor yayo ukuya kwiTempile engaqhelekanga yeDebod, ezi zikhumbuzo zaseMadrid ongenakuphulukana nazo zezona zikhokelo zibalaseleyo kwikomkhulu laseSpain.
Iintsomi zihlala emiqolombeni yaseZugarramurdi, eyaziwa ngokuba yiCuevas de las Brujas. Ukuhamba ngendawo yemilingo ekufuneka uyifumene.
Yintoni ongayibona eNew York: ezona ndawo zintle esixekweni ezingalaliyo
I-Statue of Liberty, iBrooklyn okanye i-icon Square ye-Times zezinye zezinto ekufuneka zibone indawo eNew York. Ngaba ufuna ngaphezulu?
Ukuba uneentsuku ezi-2 okanye ezi-3 zokunqamula kwaye ufumanise iindawo ezintsha, ezi ndawo zokubaleka ngempelaveki zenza kube lula kuwe.
Yintoni enokuyenza eBenidorm
Sineyona mpendulo ilungileyo kumbuzo wento oyenzayo eBenidorm. Kuba yindawo eneekona ezininzi zokubona kunye nemisebenzi ekufuneka uyenzile.
Yintoni ongayibona eSardinia
Xa sicinga ngento emasiyibone eSardinia, iindawo ezininzi ezizodwa nezimangalisayo ziye zithi qatha engqondweni. Namhlanje sibajonga bonke.
Amachibi e-Plitvice: I-Fairytale Croatia
Iingxangxasi zemilingo, iintaba kunye namahlathi e-beech okanye amachibi e-fairytale enza iPlitvice Lakes National Park eCroatia. Sukuphoswa yiyo
Ukuba uyazibuza ukuba wenzeni kwaye ubona ntoni kwilali yaseRocío, sinezona mpendulo zibalaseleyo. Imisebenzi kunye neendawo zokuzonwabisa.
I-Setenil de las Bodegas: ubugcisa bokwenza ilitye
Njengeyona dolophu inomdla eAndalusia, iSetenil de las Bodegas ikumema ukuba uhambe uhambo olumnandi phakathi kwezindlu eziqingqwe elityeni uqobo.
Amakomkhulu akuMbindi Mpuma
AmaSilamsi aluhlaza, izithili zezezimali zexesha elizayo okanye ubumelwane obhalwe yimbali benza ezi ngqukuva zoMbindi Mpuma ongenakuphoswa zizo.
Sijonge ezona zilwandle zibalaseleyo ehlabathini ukubaleka umhlaba phakathi kwamanzi aluhlaza, isanti emhlophe kunye namakhulu emithi yesundu
IBarrio de Santa Cruz eseSeville: ungafika njani apho, yintoni oza kuyibona
Indawo yaseSanta Cruz eSeville yi-labyrinth yeemfihlo, imibala kunye ne-duende entliziyweni yekomkhulu laseAndalusi.
Iidolophana ezintle eSierra de Aracena (eHuelva)
Ukulahleka kwezi lali zintle eSierra de Aracena kuthetha ukungena kwiphondo laseHuelva apho kugcwele khona ham, umlingo kunye noxolo.
Yintoni ongayibona eSierra de Cádiz
Ukusuka kumtsalane weelali zayo ezimhlophe ukuya kwimithombo yeSierra de Grazalema Natural Park, kuninzi ukubona eSierra de Cádiz.
Yintoni ongayibona kuJerez de la Frontera
Sizicwilisa kwesinye sezixeko ezibengezelayo eAndalusia ukufumana yonke into oyibonayo eJerez de la Frontera.
Iindawo ezifanelekileyo zokutyelela
Isixeko seentlawulo ezingama-4000 okanye isiqithi esithandwayo sikaMarco Polo zezinye zeendawo ezilungileyo onokuzityelela ngo-2019
Inkcubeko yaseJapan: izinto ezi-8 ongazifuniyo
Ezi zixhobo zisi-8 zenkcubeko yaseJapan zihamba ngendlela yegastronomy, yokomoya okanye yoluntu yelizwe elahlukileyo nelinomdla.
EParis ngeentsuku ezi-3: yintoni ongayibona kunye nento oyenzayo
Ukusuka kwi-Eiffel Tower ukuya kwiNdlu yaseVersailles sikhenketha eParis kwiintsuku ezi-3 ngeendawo ezahlukeneyo kunye neendlela ezinomtsalane.
I-Kuala Lumpur Petronas Towers: Ukusuka kwiindawo eziphakamileyo zaseMalaysia
IPetronas Towers eKuala Lumpur ayisiyiyo enye yeempawu ezinkulu zaseMalaysia kodwa uloyiso lwaseAsia luxhaswe yinkcubeko kunye nezinto ezintsha.
Izicwangciso zempelaveki njengesibini
Ukusuka kwiseshoni ye-spa ukuya kulahleka kwiidolophu ezinomtsalane, ezi zicwangciso zempelaveki njengoko isibini siza kukuphumelela. Uzenzile zonke?
Inqaba kaMad King: Xa iJamani yaphefumlela iDisney
Ukukhuthazwa ngamabali kunye neemfihlakalo, iNqaba kaMad King eJamani yayisebenza njengefilimu ye-Disney's Sleeping Beauty movie.
Yintoni ongayibona eRonda: intsomi, i-duende kunye neebhlorho ze-epic
Ukusuka kwi-Old Bridge ebukekayo ukuya kwiikona zayo zomtsalane wamaMoor, kuninzi ukubona eRonda, esinye sezixeko ezintle eSpain.
Ezona zixeko zihle eSpain
Ukusuka kubukhulu beSeville ukuya kwi-cosmopolitan ye-Barcelona, ​​ezi zixeko zihle kakhulu eSpain ziqinisekisa umahluko omkhulu welizwe lethu.
Iidolophu ezintle eAlicante ekufuneka utyelele zona
Ukusuka ematyeni ukuya ekunyukeni phakathi kwekhulu lolwandle ukuya kwiinqaba zelinye ixesha, ezi dolophu zintle zaseAlicante zigcwele umtsalane kunye neemfihlo. Ngaba uyabazi?
Ukuphonononga indlu ka-Anne Frank eAmsterdam
I-Anne Frank House ayisiyiyo enye yezinto ezintle eAmsterdam, kodwa sisibonakaliso sesinye seziqendu ezimnyama kwimbali.
Iziqithi zeCanary zibonisa ingubo yokhetho kunye nezinto ezinomtsalane ezifumana eTenerife eyona ndawo ibalaseleyo onokuthi uzonwabele zonke. Ukusuka ekudada kwiilwandle zamaphupha ukuya kunyuka incopho ephezulu eSpain, zininzi izinto zokwenza eTenerife kwiinyanga ezizayo.
IBerlin kwiintsuku ezi-3
Ungaphoswa yeyona ndawo ingumfuziselo onokuyonwabela eBerlin kwiintsuku ezi-3. Abamelwane, izikhumbuzo kunye nezinye ezininzi kutyelelo lweyure ezingama-72.
Phakathi kwezi dolophu zintle eSpain, sihamba ngezitalato ezimhlophe zaseTeguise ukuya kugqiba phakathi kweengcongolo kwiPaza uSodolophu waseChinchón.
Ukuhamba phi ngoNovemba
Ukuba ufuna ukwazi ukuba ungahamba phi ngoNovemba, sikushiya neyona ndawo intle onokuyonwabela kuloo nyanga. Iikona ezizodwa ezizele ngumtsalane
Inqaba yaseBran okanye iDracula's castle yenye yeendawo ezimiselweyo zokumisa eRomania. Indawo enomtsalane kunye namabali emva kwayo.
Idolophu yakudala, njengoko isaziwa njalo, kwaye oko kungamabhodlo. Kodwa nangona esitsho njalo, iBelchite inezinto ezininzi ezisafuna ukusibonisa. Inembali enkulu ngasemva kwayo kwaye namhlanje yenye yezona ndawo zityelelwe kakhulu. Awukamazi okwangoku?
Iziqithi zeLofoten zineekona ezininzi zokutyelelwa. Hayi kuphela kwiidolophu esiza kudibana kuzo zonke inyathelo. Kodwa kukuziqhelanisa nemisebenzi esinokuyenza. Ngaphandle kokulibala izibane zasemantla ukonwabela.
Indlela yeeLali eziMhlophe
Indlela yeedolophu ezimhlophe yenye yeendawo zokundwendwela ezinkulu ezikwiphondo laseCádiz. Ukuhamba ngeedolophu ezikufunxayo kwimbali yazo, inkcubeko kwaye, ewe, ubuhle bazo. Awunakuphosa nanye kuzo kuba zonke zibalulekile kule ndlela!
Ukutyelela kwidolophu yaseCamden yinto engaphaya kokunyanzelwa. Indawo eyahlukileyo apho umculo, iimarike kunye nezinye iindlela ezizezinye ziyahlangana. Konke oku kutsala amawaka abakhenkethi rhoqo ngeempelaveki. Ayisiyonto incinci!
Ikota yeGothic yaseBarcelona
Zininzi iimbombo ezahlukahlukeneyo esinokundwendwela xa sithetha ngekota yeGothic yaseBarcelona. Namhlanje sibabeka phambi kwakho ukuze bangakubaleki.
Umkhokeli wabakhenkethi waseBarcelona
Esona sikhokelo silungileyo kwiBarcelona. Ngena apha ukhuphele isikhokelo sethu esipheleleyo seBarcelona kwiPDF. Ke unokuprinta isikhokelo seBarcelona kwaye ufumanise isixeko ngaphandle kokulahla nantoni na nokonga ixesha. Zonke izikhumbuzo kunye neendawo ongenakuphoswa zizo ukuba ukhenketho e-Barcelona, ​​yenye yezona zityelele kakhulu emhlabeni.
Abamelwane kunye neebhlorho zase-Elche
Namhlanje i-Elche ineendawo ezininzi zokuhlala, ezintsha nezesintu, zinkulu okanye zincinci, kodwa nganye inazo ...
Indawo ejongwa liphondo laseGuadalajara yahluke kakhulu ngokwemihlaba yezityalo, isiphumo se ...
Anise rolls, iimveliso ze-Elche
Iresiphi yendabuko evela e-Elche kunye neLevante yindawo yeRollos de Anís, ethi ...
Ukutyibilika emkhenkceni e-Elche
Ukutyibilika emkhenkceni yenye yezinto ezinomtsalane eziboniswa sisixeko sase-Elche. Umkhondo uku ...
Izilwanyana nezityalo eCuenca
Uhlaza lwaseCuenca lelinye lawona malungelo anokubakho kwingingqi, kuba ngenxa ...
Yintoni ongayibona eLondon
Ukuba uyazibuza ukuba uza kubona ntoni eLondon, ungaphuthelwa sisikhokelo kunye notyelelo olubalulekileyo lwe-17 esixekweni. Ngaba ubazi bonke?
Isikwere esiBomvu seRashiya
Fumana iindawo eziphambili oza kukwazi ukuzibona kwiRed Square yaseRashiya. Indawo egcwele iimyuziyam, izindlu zecawa kunye nendawo yokuthenga.
Amasiko kunye neminyhadala yaseKhanada
Sikuxelela ukuba zithini izithethe zaseKhanada kwaye yeyiphi eyona minyhadala yaseCanada kwaye amawaka abantu azimasa unyaka nonyaka. Ngaba uyabazi?
Terracotta Warriors, imfihlo yokugqibela enkulu China
Amanani ayi-8 lamawaka aphakamisa ubukho bamaTerracotta Warriors, e-China, aqhubeka nokuba yenye yeemfihlakalo ezinkulu zempuma enkulu.
Izinyuko ezi-5 ezimibalabala kwihlabathi liphela
Ezi zitepisi zinemibala emi-5 kwihlabathi liphela ziqinisekisa ubuchule bobugcisa basezidolophini kwizixeko ezinjengeSeoul okanye iSan Francisco.
Yintoni ongayibona eBern, ikomkhulu laseSwitzerland
Iinqaba ezikwimbali, iigadi zamaphupha kunye neebhere zenza isixeko esimangalisayo seBern, ikomkhulu laseSwitzerland.
Igumbi lokukhanya elinguGreen, eDenmark yokuqala ye-100% yesakhiwo sendalo
Indlu yokuKhanyisa eGreen yaseDenmark, eyavulwa ngo-2009 eCopenhagen, ngomnye wemizekelo ebalaseleyo yokwakha okuzinzileyo kwihlabathi.
Imimandla yeJografi yaseColombia
Fumanisa iingingqi zeColombia, zingaphi onazo? Sikuxelela iimpawu kunye nezinto ezizodwa zazo.
Sichaza umtsalane weziqithi eziphambili zaseColombia: iSan Andrés, iziqithi zaseRosario, iSan Andrés kunye neProvencencia nezinye iziqithi zaseColombia.
Ezi zezona ndawo zibalaseleyo ukonwabela ngokupheleleyo ukhenketho e-Australia. Awunakuphulukana nomqobo omkhulu wethango okanye iTasmania engummangaliso!
Izibane zasemantla eNorway, umbala obonakalayo
Ukujonga ukuKhanya okuMantla eNorway kuba yinto eyonwabisayo kwabo baqhubela ngaphaya kweArctic Circle eqhuma ngombala.
Ukutyelela iAsilah, kunxweme olusemantla eMorocco
I-Asilah yidolophu encinci kunxweme olusemantla eMorocco edume ngokuphumla, iiramparts zayo kunye ne-blue and white facade ye-Medina.
ICuevas del Soplao, ummangaliso wendalo eCantabria
Oku kubizwa ngokuba yiCuevas del Soplao yinto emangalisayo yendalo. Sikuxelela ukuba ungafika njani apho, amaxabiso, iishedyuli, iindlela ezikufutshane kunye nokunye!
ISithili sokuKhanya esiBomvu saseAmsterdam sibuyeleze ucalucalulo oludala ngokunika izithili ezintathu zolonwabo ezizodwa, iivenkile zekofu kunye nobugcisa.
Yintoni uluhlu lweentaba? Siphonononga uluhlu lweentaba eziphambili zaseColombia kunye neyona nto ibalulekileyo. Ngaba ubazi bonke?
I-Angel Falls: Ingxangxasi ephezulu eVenezuela
Igutyungelwe yinkungu kunye namabali amadala, iAngel Falls, eVenezuela, ihlala ingoyiki njengeyona ngxangxasi iphakamileyo ehlabathini.
Ezi ndawo zili-8 kwiCaribbean omele wazi azibandakanyi iilwandle kuphela, kodwa zikwinqaba ezaziwayo, iidolophu zekoloniyali kunye neepaki zendalo.
Yintoni ongayibona eAlmuñécar, kuNxweme lweTropiki eGranada
Ifumaneka kwiCosta Tropical yaseGranada, iAlmuñécar yindawo efanelekileyo yokuhlangana kweelwandle, indalo kunye nokuzonwabisa.
Imbali kunye nekholoni yaseVenezuela
Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi malunga nekoloniyali kunye nembali yaseVenezuela? Ungaphoswa leli nqaku apho sityhila zonke iimfihlelo zaseVenezuela
Yintoni oza kuyibona eCuba kwiiveki ezimbini
Ukusuka kwizitalato ezintsomi zeOld Havana ukuya kwimibala yaseTrinidad, ezi ngcebiso zokwazi into oza kuyibona eCuba kwiiveki ezimbini ziya kuba luncedo olukhulu.
Izicwangciso zangaphandle ezingama-7 eBarcelona
Ezi zicwangciso zangaphandle zisi-7 e-Barcelona zibandakanya yonke into ukusuka emithonjeni enemibala ukuya kwiiseshoni ezivulekileyo zecinema ukuya kwiiklasikhi ezifana neParc Güell.
Ezi ngcebiso zingama-25 zokuya eCuba ziya kukunceda ufumane kwaye wonwabe nangakumbi yenye yezona ziqithi zihle kwiCaribbean.
Sikuzisa zonke iimfihlo zenkolo eMorocco: imbali, izithethe, unqulo kunye nemibono yelizwe elilandela isiko lamaSilamsi
I-aroma, imibala okanye i-haggling zihlangana kunye kwiisokisi ezingaqhelekanga zaseMarrakech ukutyelela ngalo lonke ixesha lokundwendwela isixeko esidumileyo saseMoroccan.
Essaouira: idolophu eluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe yaseMorocco
I-Essaouira, kunxweme lweAtlantiki iMorocco, yiparadesi eluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe egcwele imbali, inkcubeko, ubugcisa kunye nolwandle.
Isixeko saseTarragona sidibanisa ezinye zeesampulu ezimangalisayo zobugcisa, inkcubeko kunye nembali kwilizwe lethu.
Ngaba uyafuna ukwazi zonke iinkcukacha zeminyhadala ebaluleke kakhulu eMorocco? Sikubonisa imithendeleko ephambili yaseMorocco kunye nemihla
Ukuba uza kutyelela iidolophu zaseKhanada, landela esi sikhokelo ukufumanisa ukuba leliphi elona xesha lilungileyo kweli lizwe kwaye zeziphi ezibandayo enyakeni
Ukuba uza kutyelela iMorocco, ungaphoswa sisikhokelo sethu sokundwendwela ezona zixeko zintle zintle eMorocco, ezinje nge-Ifrane, Fes okanye Marrakech
Fumanisa ukutya okuqhelekileyo kweCosta Rica kunye nezinye izidlo zeAfro-Caribbean ezinje ngerondon, gallo pinto okanye icasado phakathi kwabanye.
Yintoni ongayibona eDominica, kwiCaribbean zekamva
Iingxangxasi zamaphupha, iilali zokuloba kunye neentaba-mlilo ezidibeneyo ziyahlangana kwisiqithi saseDominica, kwiCaribbean yexesha elizayo, i-ecotourist kunye nemfihlo.
Iidolophu ezi-8 ezinemibala eLatin America
Ezi zixeko ziyi-8 ezimibalabala eLatin America zineecawe ezimthubi, izindlu ezipeyintiweyo kunye namaqela e-psychedelic agcwele amandla kunye nembali.
Elona xesha lilungileyo lokuya eNorway
Ukuba uceba ukuya eNorway, ungaphoswa sisikhokelo sethu sokufumanisa ukuba zeziphi iinyanga ezilungileyo ukonwabela le ndawo ikhethekileyo
Izitya eziqhelekileyo zaseSweden
Ngaba uyazi ukuba eSweden awutyi nje isalmon kunye neebhola zenyama? Siza kukubonisa zonke iimfihlelo zesisu sayo, kunye nezona zitya ziqhelekileyo zaseSweden zeli lizwe
Izinto ezinomdla malunga nePortugal
Ukuba uza kutyelela iPortugal, ungaphoswa sisikhokelo sethu sokwenza uninzi lweholide yakho kule paradesi ye-surf
Izinto onokuzibona nokuzenza ePortugal
Zininzi izinto onokuzibona nokuzenza ePortugal, sikubonisa ezona ndawo zibalulekileyo ongenakuphulukana nazo kuhambo lwakho
Izambatho zemveli zaseDatshi
Phakathi kweempahla zemveli zaseDatshi, ii-clogs zazo ezaziwayo ziyabonakala, kodwa sikubonisa zonke iimpahla zesiko lesiDatshi
IiRediyo kunye neCayo Santa María, inkcubeko kunye neelwandle eCuba
Ukuba ujonge ukuya eCuba engekafumaneki, awunakuphulukana nethuba lokundwendwela iRemedios kunye neCayo Santa María, emantla esiqithi.
Iindawo ezili-10 eMzantsi Melika ekufuneka uzibonile kube kanye ebomini bakho
ISalar de Uyuni okanye iMachu Picchu zezinye zeendawo ezili-10 eMzantsi Melika ekufuneka uzibonile kube kanye ebomini bakho.
IKenitra, iMorocco kunye nobusuku bobusuku
Ukuba uza kuya eKenitra, ungaphoswa ziingcebiso zethu ukonwabela ngokupheleleyo amathuba esi sixeko eMorocco
Indawo entle eOregon
I-Oregon ibonelela ngendalo enomtsalane yeendawo ezimangalisayo apho nabakhenkethi kufuneka babatyelele kube kanye ebomini babo.
Iilwandle zeCaribbean eziyi-8 kufuneka undwendwele
IMexico, iCuba okanye iBarbuda engaziwayo zezinye zeziqithi apho kukho iilwandle ezisibhozo zeCaribbean ekufuneka uzindwendwele.
Izinto ezili-9 ekufuneka uzenzile eHavana
Ukutya iidessert ezimnandi, ukutyelela iMalecón okanye ukulahleka kwindawo efihlakeleyo zezinye zezi zinto zili-9 kufuneka uzenze eHavana.
Ukuqhagamshela kwi-Intanethi eCuba
Ukwazi ukuba uqhagamshela njani kwi-Intanethi eCuba kuya kuba luncedo olukhulu ekuqwalaseleni unxibelelwano olusezantsi kwesiqithi seCaribbean.
Iingcebiso zokuya eCuba
Ezi ngcebiso zokuhamba ukuya eCuba zisuka kwindawo yokuhlala ukuya kwindlela onokunxibelelana ngayo nabantu baseCuba abashushu nabaluncedo.
Iinyani zokuzonwabisa malunga neHolland
Ngaba uyazi ukuba iAmsterdam ineyona ndawo yoxinzelelo lwemyuziyam ehlabathini? oku kunye nenyaniso enomdla malunga neHolland eya kukumangalisa
Umthombo iTrevi, ngowona mthombo mhle e-Itali
Ukubuyiswa kwakutsha nje kweTrevi Fountain kuba sisizathu esaneleyo sokutyelela iRoma kwakhona kulo nyaka.
Imidaniso yesiDatshi yesiNtu
Sikuzisa ukudityaniswa kunye nemidaniso yesintu eqhelekileyo yaseHolland, ukuze wazi iimfihlo zabo kunye nezithethe zabo.
Amasiko nezithethe zoluntu lwaseNorway
Ngaba uyazi ukuba uluntu lwaseNorway luthatha usapho lubaluleke kakhulu? Sikubonisa onke amasiko kunye nezithethe zamaNorway
I-Itali kunye nezixeko zayo ezili-10 ezibaluleke kakhulu
Ezi zixeko zibaluleke nge-10 e-Itali: iRoma, iMilan, iFlorence, iVenice kunye nezinye izixeko eziyimiqondiso zelizwe elidumileyo lepasta.
Iindawo ezilungileyo zokuhlala eGranada
IGranada sesinye sezona zixeko zihle eAndalusia kwaye efumana abakhenkethi abaninzi minyaka le. Izitrato zayo ngaphezulu ...
Iingcebiso zokuya eMorocco
Ezi ngcebiso zokuya eMorocco zibandakanya iingcebiso eziluncedo eziza kukuvumela ukonwabela umlingo kunye nomtsalane welizwe laseMaghreb.
Awazi ukuba zeziphi izithethe kunye namasiko esiNgesi? Sikufundisa amaqela abaluleke kakhulu, imbali yeti ye-5: 00 ...
Iinkcukacha ezimnandi malunga neNgilani
INgilani lelinye lamazwe amane enza i-United Kingdom, awona makhulu kuwo, kunye nembali yawo, ...
Eyona ndawo inomdla eVenezuela: iAngel Falls
I-Angel Falls okanye iAuyan-tepui yenye yezona zinto zinomdla eVenezuela ngobuhle bayo, imbali kunye nemeko eyahlukileyo emhlabeni.
Elona xesha lilungileyo lokuya eRashiya
Landela iingcebiso zethu ukuze wazi ukuba leliphi elona xesha lililo okanye ixesha lonyaka lokuya eRussia kwaye ukwazi ukonwabela uhambo lwakho
Iindawo ezi-8 emhlabeni apho ifilimu ye-Star Wars yafotwa khona
I-Seville, iTunisia okanye iMaldives zezinye zeendawo emhlabeni apho ifilimu ye-Star Wars yafotwa khona. Ukusuka kwiThemba elitsha ukuya kwiRogue One yamva nje.
Ukuba ufuna ukwazi zonke iimfihlelo zembali kunye nenkcubeko yeCaribbean, ungaphoswa yile post ukuze wazi yonke into malunga nenkcubeko yeCaribbean
Amaqela emveli eVenezuela
Uluhlu kunye nenkcazo yamaqela aphambili emveli ahlala eVenezuela, namasiko nenkcubeko yawo icacisiwe ngokubanzi.
INeuschwanstein, Inqaba yaseCinderella
Ngaba uyafuna ukutyelela iNqaba yeNeuschwanstein, ibhotwe elifana neCinderella? Ewe, landela esi sikhokelo apho sichaza yonke into ekufuneka uyazi
ICagagena de Indias yindawo eyaziwayo eCaribbean yeCaribbean. Kule posi sikuxelela ukuba zeziphi ezona zilwandle zibalaseleyo eCagagena.
Iindawo ezinomdla e-Itali
Iindawo zomdla wokundwendwela kuhambo oluya e-Itali. Iindawo ezinomfanekiso onjengeRoma, iSicily, iFlorence kunye nento oza kuyifumana kulowo nalowo.
Fumanisa izindlu zaseTaíno zaseCuba kunye nomtsalane wazo. Yeyiphi imbali ebangela ezi zindlu zendalo zenkcubeko yaseCuba? Ngena uze ufumanise!
Fumanisa iintyatyambo nezilwanyana zaseGrisi, ilizwe elahlulwe ngamacala amabini amakhulu njengehlathi laseMeditera kunye nehlathi elinomthi oqinileyo.
Ndikucebisa ukuba ufumane ezinye iikona zeAmsterdam ezingaphandle, okanye ezingatyekelwanga ngabakhenkethi ... qhubeka uye usixelele ukuba ucinga ntoni.
Iminqweno yaseYiputa yabantwana
Imbali kunye nomnqweno wase-Egypt wokuxelela abantwana. Ukuba ufumana ithuba, hamba nabo uye eYiputa.
Ezona mbono zibalaseleyo kwiimbono eSwitzerland
Iimbono ezintle ezinikezelwa yindalo kunye neentlambo zayo kunye neentaba, esikunika zona kwiindawo eziphambili eSwitzerland.
I-Nooks eHolland kuya kufuneka ugcine imfihlo
Ndikhethe iimbombo ezine ukuba okokuqala e-Holland awuyanga, awungekhe ulahleke kutyelelo lwakho lwesibini ... okanye kolwakho lwesithathu.
Ezona zixeko zibalulekileyo kwiiPhilippines
Namhlanje sizinikele ekwazini ezona zixeko zibalulekileyo kwiiPhilippines.
IsiXeko saseMbali saseQuezon
ISixeko saseQuezon sesona sixeko sineyona ndawo inabantu abaninzi kwiiPhilippines.
Yazi iindawo ezi-6 ezintle e-Itali
I-Italiya kufuneka ibe ngunaphakade, nangona kunjalo senze ukhetho oluxabisekileyo lokuba wazi ezona ndawo zintandathu zihle e-Itali.
Ukuba uza kuya eColombia, ungazi ngcono amasiko kunye neminqweno yaseColombia. Ungaphoswa onke amasiko aseColombia!
Zeziphi ezona ziqithi zikhulu zamaGrike zokuhamba nosapho
Bhala ukuba zeziphi ezona ziqithi zibalaseleyo zamaGrike zekhefu losapho elingenakulibaleka!
Ukuhamba okanye ukungahambisi eGrisi
Ukuba uya eholideyini ukuya eGrisi, kuya kufuneka uyazi yonke le nto malunga nokuntywila eGrisi.
Ingcebiso eIreland, ukushiya okanye ukungahambi
Ngaba uya eIreland? Ngaba uyazi ukuba kufuneka ushiye ingcebiso okanye hayi? Apha kulapho kwaye nini ukucebisa eIreland.
Ngaba kufuneka uphe e-Australia? Hayi okanye ewe? Nini?
Iipaki zokuzonwabisa zaseRoma
Siyakumema ukuba undwendwele ezona ndawo zintle zokuzonwabisa ukuba ugqiba kwelokuba uchithe iiholide zakho kwikomkhulu, usapho lwakho okanye abahlobo bakho.
Amasiko kunye nenkcubeko yommandla weAmazon
Ukudityaniswa kwazo zonke iinkcukacha malunga namasiko nenkcubeko yeAmazon ukuze ukonwabele uhambo lwakho ngeAmazon Colombian
Izikhumbuzo zenkolo kunye neecawe zaseAthene
Inkulungwane ye-XNUMX neye-XNUMX zazithathe isigqibo sobugcisa baseByzantium baseAthene. Ebudeni beenkulungwane ezimbini iicawa zahluma ...
I-abbeys ezintathu ezindala eTuscany
Ukuba uya eTuscany, qiniseka ukutyelela ezi ndawo zimbini zakudala zamaxesha. Uya kuyithanda!
Injani iNkqubo yezeMpilo ePortugal
Inkqubo yezempilo yasePortugal yahlukile kwamanye amazwe ngengqondo yokuba ulapha ...
Iibhari zabantu abathandana nabathandana nabathandana nabathandana namanye kunye nabaseHavana
Bhala phantsi amagama ale mivalo mibini kubantu abathandana nabathandana nabathandana nabathandanayo eLavana
Amachibi amangalisayo eSwitzerland
Phakathi kwazo zonke izinto ezimangalisayo zendalo eSwitzerland ngamachibi ayo omlingo. Zininzi kwaye zinkulu, nganye nganye iyamangalisa ...
Ubume bezokhenketho eNgilane
Namhlanje sicebisa ukuba ufumane indawo ekumgangatho ophezulu ngenye indlela, kuba eli lizwe linobuhle obukhulu bendalo obulungiselelwe ...
Imidlalo ebalaseleyo e-Itali
Ukuba ungumthandi weadrenaline, uya kufumana indawo efanelekileyo kweli lizwe. Inika amathuba amaninzi okuziqhelanisa ...
Ulwazi malunga neRoma
IRoma, ikomkhulu lase-Itali, sesona sixeko sidala eYurophu kwaye isisazulu senkolo yamaKatolika e ...
Amasiko kunye namasiko ePasika eNetherlands
E-Holland yiholide kuphela ngePasika ngeCawa nangoMvulo, kwaye abanalo uphawu lwezenkolo. Abantwana bonwabile "ngokuzingela amaqanda".
Yintoni ongayibona kwiSyntagma Square, eAthene
Ukuba uya eAthene, qiniseka ukuthatha imizuzu emihlanu ukuhamba ujikeleze iSyntagma Square kwaye uyayixabisa imo esingqongileyo,
Iindlela ezintle kakhulu eGrisi
Uhambo oluya eGrisi luya kuba luyolo kubo bonke abathanda ukuhamba. Imimandla erhabaxa, iindlela ezincinci ezinamatye ...
Kuthathwa njengelinye lawona mazwe makhulu e-United Kingdom, iNgilane ineendawo ezahlukeneyo zabakhenkethi ...
Jonga iSwitzerland ngeentsuku ezintathu
Ukutyelela iSwitzerland ngeentsuku ezintathu, into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuya kwisixeko saseGeneva, ukusukela ...
Ukhenketho lweendawo zabakhenkethi eNgilane
Ukutyelela ilizwe elingelolethu kunokuba nzima kakhulu, kukho imiqobo eliqela ekufuneka sisoyisile, ukusuka ...
Izikhephe zaseAmsterdam, enye indlela yokuhlala esixekweni
Kwimijelo ye-165 yaseAmsterdam kukho amaphenyane angama-2.500 XNUMX ahlala iintsapho, izibini ezitshatileyo, abahlobo, iihotele kunye nemivalo. Sukuyeka ukubatyelela.
Uluhlu lweendawo zabakhenkethi zasimahla eIreland
Thatha isithuba sangooLwezithathu basimahla ukutyelela eyona ndawo ibalaseleyo yaseIreland
I-Ireland, iilwandle eziphezulu ze-nudist
Yazi elona lwandle lubalaseleyo kubantu baseIreland
Olunye lolwandle oluhle kakhulu e-Australia
Eyona milambo ihamba ze kunye ne-topless e-Australia
Ukhenketho lweSixeko kwiitram zembali zaseMilan
Itram yomlando waseMilan ukhwele
Inqaba yaseVilafamés, ingqina kwimbali yedolophu
Inqaba yaseVilafamés, enemvelaphi yama-Arabhu, imi ngaphezulu kwedolophu yakudala, kodwa siyakuqinisekisa ukuba izimvo kunye nokunyuka okulula kufanelekile.
I-Basilica yamandulo nebukrelekrele yaseSanta Constance
I-Basilica yaseSaint Constance yenye yeecawa ezindala eRoma
Umsele wasePhilippine, yenye yezona zinzulu ehlabathini
Umsele wasePhilippine yenye yezona zinzulu ehlabathini.
Intlango yeLemnos, yahlukile eGrisi
Intlango yeLemnos yeyona ntlango iyodwa eGrisi naseYurophu
I-Caribbean: Ii-Antilles ezinkulu okanye ii-Antilles ezincinci
IiCaribbean zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zabakhenkethi. Sijoyine ukuze ufumanise ukuba indawo yakho ekuyo ikwii-Antilles ezinkulu okanye ii-Antilles ezingaphantsi.
IAthene, izithethe, iindlela zokuphila kunye namasiko
Abahlali bendawo bahlukile ngeempawu ezinje ngovakalelo kunye novalo, nangona kwiimeko zoxanduva, banokubonisa ukunyamezelana kwaye basombulule ngokulula nayiphi na imbambano. Alithandabuzeki elokuba iAthene inenkcubeko yayo kwinqanaba lonxibelelwano.
ILondon yindawo yemidlalo yeqonga yokuqala apho kwabonakala umbhali odumileyo waseNgilani, iShakespeare's Globe Theatre okanye Shakespearean Theatre
Itempile ye-Hua yeyona tempile inkulu yaseYurophu yaseBuddhist kwisitayile sendabuko saseTshayina. Ime kwikota yaseAsia eAmsterdam.
Izizwe zemveli eVenezuela: Warao
Sikuxelela konke malunga neWarao, isizwe somthonyama saseVenezuela esinokutya okuphawulekayo, ubugcisa, imfundo, ukuthutha kunye nezindlu
Elona chibi lihle eAthene
Zonke iilwandle ezikufutshane neAthene zithandwa kakhulu ngeenyanga eziqala ngoMeyi ukuya kuJulayi.
Iinyani ezi-5 ezinomdla ngeManila
Iinyani ezi-5 ezinomdla zokukhumbula iManila
I-Bachelor Party kwiCaribbean
Ipati ye-bachelor ngesihlandlo esinye ebomini. IiCaribbean zibonisa ezinye iindlela ezintle zokuyibhiyozela.
ISierras de Córdoba: ukunyuka ukuya eCorralejos River Waterfalls
Namhlanje siqala uhambo oluya eCorralejos River Waterfalls eCalamuchita.
IiMyuziyam zaseMelika eziGqwesileyo zeDinosaur
Emva koko sifuna ukuthetha ngezona ziko lolondolozo lwembali zibalaseleyo e-United States, njengenye indlela yokonwaba
Izikhumbuzo ezibalulekileyo eNgilani
Ngeli xesha sifuna ukukuxelela ngezinye zezona zikhumbuzo zibalulekileyo eNgilane, ukuqala ngeWestminster Abbey.
Iindawo zeminxeba eNgilani
Iifowuni zeefowuni eNgilani zizinye zezinto ezininzi ezahlukileyo kunye nezinto ezenza eli lizwe lihluke ngokukodwa kwisixeko saseLondon.
Imisebenzi kaMichelangelo onokuyifumana eRoma
IVenice ineengxaki kubakhenkethi
IVenice ineengxaki ezinkulu kubakhenkethi
Leliphi elona xesha lilungileyo lokundwendwela iSwitzerland?
Elona xesha lilungileyo lokundwendwela iSwitzerland lixhomekeke kakhulu kwinto ofuna ukuyenza wakube ukuloo lizwe.
Iindawo ezi-5 ezilungileyo kakhulu e-United States
I-United States lilizwe elinikezela inani elinomtsalane kusapho lonke, kunye ne-aquariums yenye yezona zinto zithandwayo.
IiRoyal Guards kwizigodlo zaseLondon
IiRoyal Guards zonke ziyinxalenye yeCandelo lamaKhaya, eligade iRoyal Palaces ukusukela ngo-1660
Umqolomba weCave Canem ePompeii
ICave Canem yimizobo eyaziwayo evela kumabhodlo asePompeii
Ukutya okuqhelekileyo kwesiDatshi ngeentlanzi kunye nokutya kwaselwandle
Ukucheba yenye yezona ndawo ziphambili kunye nezona zixhaphakileyo kwizidlo zaseDatshi kwaye zisondele kakhulu kuloo nto inento yokwenza nentlanzi kunye neentlanzi.
IJografi yePhilippines: iinyani ezinomdla
Inyaniso enomdla malunga nejografi yePhilippines.
IHole yokuKhanyisa yeTempile yeTodaiji
Ithempeli laseTodaiji eNara linomngxuma odumileyo othembisa ukukhanyiselwa kuye nakubani na okwaziyo ukuwela. Apha sikuxelela ngaphezulu.
Izikhumbuzo ezivela eYiputa
Akukho nto injengokundwendwela iimarike zalapha ekhaya ukudibana nabantu belizwe. Kodwa ezona zilungileyo zizikhumbuzo onokuzithenga eYiphutha.
ICosta Smeralda, eyona ilungileyo eSardinia
Unxweme lwe-Emerald lolunye lolona nxweme luhle kakhulu eSardinia
Isihlomelo esiFihlakeleyo, i-Anne Frank House
Isihlomelo semfihlo, ePrinsengracht 267, yeyona ndlu ityelelweyo eAmsterdam, yindlu awayehlala kuyo u-Anne Frank kwaye kuyo wabhala indawo enkulu kwidayari yakhe.
Iindawo zokundwendwela eNgilane
Zininzi iindawo zokundwendwela eNgilane ezinje ngeDevon kunye neCornwall ezaziwa ngokuba ziilali zesiNgesi apho ungasela khona iti kwaye wabelane nabahlobo.
IKhabinethi eyimfihlo, iPompeii eroticism
IKhabinethi eyimfihlo iqulethe ingqokelela yezinto ezikhuselayo ezivela kumabhodlo asePompeii
IVolainbus, yiya eFlorence uye kwisikhululo seenqwelomoya
IVolainbus yibhasi edibanisa iziko laseFlorence nesikhululo seenqwelomoya saseFlorence
Ezona zikhumbuzo zilungileyo eSantorini
Uluhlu lwezona zikhumbuzo zilungileyo eSantorini
IMilan sisixeko esineendawo ezininzi, ezinye zinomtsalane ngakumbi, ezinye zilula kwaye zihluthwa ngakumbi.
Iindawo zokhenketho ezijikeleze iRoma
Isixeko saseRoma sodwa sikunika uluhlu olubanzi lweendawo ezinomdla apho ungonwabela khona kwaye ufunde ngembali, inkcubeko kunye namasiko amandulo.
Iicawa ezilungileyo eSantorini
Iindawo zokundwendwela ePiraeus
EPiraeus, izibuko laseAthene, kukho iindawo ezimbalwa ezifanelekileyo ukutyelela, kubandakanya iimyuziyam kunye neentselo zentselo.
Icawa yaseDominine Quo Vadis, kwiNdlela yeAppian
Icawa ye-Domine Quo Vadis yicawa yakudala ebekwe kwi-Apiyo Way apho kuthiwa uPetros wabona uYesu
ISanta Marinella, unxweme kwindawo engqonge iRoma
Iikhilomitha ezingama-70 kumantla eRoma yiSanta Marinella, indawo entle yolwandle yamaRoma
Landela iNdlela yeeTonela ezingama-52
Umzila wamaTonela angama-52 yenye yeendlela ezintle zokuhamba zabakhenkethi e-Itali
Amangcwaba e-Saint Peter kunye noMarcellin
Amangcwaba e-Saint Peter kunye noMarcellin, aneemitha zesikwere eziyi-18.000, yeyesithathu ngobukhulu eRoma
Indlela ye-Freemasonry eRoma
Enye yeendlela ezininzi ezinokwenziwa eRoma yiNdlela yeMasonry, ehamba ngeekona zeFreemasonic zesixeko
Ibhotwe laseFarnese eCaprarola
Iikhilomitha ezingama-85 kumantla eRoma sisixeko saseCaprarola, esona sinomtsalane ophambili kwibhotwe laseFarnese
Ukufika njani eTivoli usuka eRoma
Kule nqaku sichaza indlela onokufika ngayo eTivoli ukusuka eRoma ngemoto, ngebhasi okanye ngololiwe
Ukuba uyathanda nyani ukuya enkampini, njengoko abanye besitsho, ndiza kukuxelela ukuba ungaya enkampini ...
Yintoni oza kuyinxiba eParis ebusika
IParis sisixeko esizenza saziwe nangaliphi na ixesha, nokuba kusebusika, nangona ngeli xesha lonyaka kufuneka unxibe iimpahla ezifudumeleyo.
Iimarike ezintathu ze-antique eVienna
Ukuhambahamba kwiimarike zakudala zaseVienna
Imarike yangeCawa yaseMonastiraki eAthene
Kwingingqi yaseMonastiraki intengiso entle ibanjwa rhoqo ngeCawa, kucetyiswa kakhulu ukuthengwa kokuhamba kwemveli.
Isithili saseChinatown eMilan
Ukujikeleza ngePaolo Sarpi yindawo yaseChinatown, efanelekileyo yokuthenga okanye yokutya
Iindidi zokuhlala eVenezuela
Kukho iindidi ngeendidi zokuhlala eVenezuela, ukusuka kwiihotele zodidi oluphezulu ukuya kwiindawo ezisisiseko zokuhombisa….
Iiholide zokuya eSwitzerland entwasahlobo
Ukusukela nge-Matshi 20, intwasahlobo yaseYurophu iqala ngokusesikweni. Kwabaninzi elona xesha lilungileyo lokucwangcisa ...
Ezona zixeko zilishumi zihlala eNetherlands
Rhoqo ngonyaka imagazini i-Elsevier yenza uluhlu lweendawo ezingama-50 ezilungileyo zokuhlala eNetherlands ngokusekwe ...
Usuku lukaSanta Patrick eCanada
Usuku lukaSt. Patrick lubonwa rhoqo ngonyaka nge-17 ka-Matshi. Kwaye nangona ayiyonyani ...
I-Nile Cruises: Cairo ukuya eLuxor
Kukho indlela edumileyo yokuhamba kwiNayile ukusuka eCairo ukuya eLuxor ebuyele e ...
Ingcwaba likaSanta Lucia, kwiCawa yaseSan Geremia
ICawa yaseSan Geremia kunye nengcwaba likaSanta Lucia, eVenice
Kufuneka wenze ntoni eBiarritz entwasahlobo
Kude kube yiMfazwe yesibini yeHlabathi, iBiarritz yayiyiMonte Carlo yoNxweme lweAtlantic, yaguqulwa nguNapoleon III ukuba ...
Canada, ilizwe lokundwendwela entwasahlobo
ICanada imi kwi-hemisphere esemantla, ke intwasahlobo iqala ngo-Matshi ukuya kuJuni, ngelixa ...
Iilwandle zeParadisiac zesiqithi saseMargarita
Ifumaneka kunxweme olusemantla eVenezuela, i-Isla de Margarita, sisiqithi esincinci esineentaba esidumileyo ...
Izizathu zothando zokuya eNiagara Falls
Amandla kunye nobuhle be-Niagara Falls benza ukuba kube yinto ekhangayo ekhangayo ...
Iilwandle ezikufutshane neMaracaibo
Isixeko saseMaracaibo, esisembindini wommandla ovelisa icocoa eVenezuela, sisiseko ...
Ukundwendwela okumangalisayo ku-Isla Margarita
Isiqithi saseMargarita sisiqithi kuLwandle lweCaribbean malunga neekhilomitha ezingama-25 kumantla ...
Iindawo ezi-6 zabakhenkethi eSweden ekufuneka uzazi
Imizobo eqengqwe ngamatye e-Tanum Zifumaneka kwiphondo lase Bohuslän. Le ndawo yenye yeendawo ezili-12 ze ...
Ukutya kweMveli kweQuebec
Ukutya kwiphondo laseQuebec kuchatshazelwe ngamandla kukutya kwaseFrance naseIreland, ukusukela ...
Amachibi amahle kakhulu ePeru
Ukuba ufuna ukwazi ichibi elihle ePeru ngexesha lehlobo, kuya kufuneka uthathe ...
I-Anzio elunxwemeni, apho i-alids kunye noNero bahamba khona
IAnzio, unxweme kufutshane neRoma
Iiholide ezinkulu eNgilani ngo-Matshi
I-England ibhiyozela iseti yeentsuku ezikhethekileyo inyanga nenyanga ezinxulumene nembali kunye namasiko azo zonke iintlobo ...
Ukuzonwabisa kwabantu abadala eAmsterdam: IBhanana yeBhanana
I-Banana Bar, ebizwa ngokuba yi-Bananenbar ngesiDatshi, yenye yeeklabhu ezaziwa kakhulu ngokwesondo kwi-Red Light District ...
Amaziko amnandi okuntywila eMiami
IMiami yamkelwe kwihlabathi liphela ngokuba yiDolophu eyiNtloko yeDiving kuba inendawo ezininzi ...
Ukuya eFrance ebusika
Ubusika lelona xesha lincinci lidumileyo lezokhenketho eFrance, kodwa zininzi izizathu ezintle zokundwendwela. I…
Kufuneka wenze ntoni kwaye ubone eSaratov
ISaratov sisixeko esibalulekileyo esikwiindonga zeVolga, malunga neekhilomitha ezingama-858 kumazantsi mpuma eMoscow, ene ...
Kude kube ngu-16 kuFebruwari 2014, iQuebec ibibhiyozela i-Winter Carnival yayo eyaziwayo, nethi ityetyiswe ...
IPortugal, umhlaba wecarnival
Itheko leCarnival ePortugal lixesha elimnandi nelonwabisayo eliqala ngoFebruwari. Itheko…
IGrisi ngoFebruwari, iiholide kunye neminyhadala
Kwenziwe ntoni ngoFebruwari eGrisi
Usuku lukaValentine eSwitzerland, ngaphezulu kweentyatyambo kunye neetshokholethi
Usuku lukaValentine ngenye yezona ziganeko zibhiyozelwayo kwihlabathi. Nokuba eSwitzerland, i ...
Isikhululo esihle saseMayakovskaya saseMoscow
IMayakovskaya sisikhululo seMetro yeMoscow kumgca weZamoskvoretskaya. Kucingwa njengenye yezona zintle kakhulu ...
Fumana iJoshua Tree National Park eCalifornia
Kwilizwe elikhulu neyahlukileyo njenge-United States of America, ungafumana nantoni na….
UmNayile, i-oasis entlango
Enye yezona ntlambo zintle emhlabeni yiMilambo yeNayile entle, nenxalenye yayo ...
I-Umbria, yenye yezona ndawo zintle zewayini ngo-2014
Iwayini ze-Umbrian zidweliswe njengezona zibalaseleyo kwihlabathi.
Iilwandle zaseYiputa ezizithandayo
Amazwe amaninzi eMntla Afrika ahlala kwindawo enomona elwandle. Ezinye iindwendwe ziya eMorocco, ...
Izixeko eziphakathi eFrance: Agen
I-Agen yidolophu yesebe leLot-et-Garonne, kwingingqi yeAquitaine, emazantsi eFrance, ...
Ukuhamba ngeebhayisekile ukusuka eSan Francisco ukuya eLos Angeles
Indlela engalibalekiyo yokufumanisa iCalifornia kukuhamba ngebhayisikile phakathi kweendawo ezintle, izidiliya ezindulini kunye ...
Iinqanawa zepirate zikhwela eMiami
IMiami, isixeko samabhishi aso amahle, iivenkile zokutyela ezikumgangatho ophezulu, iihotele eziphambili, iiklabhu ezimbini ezinamandla kunye nendawo yabantu abadumileyo, ...
Iindawo ezilungileyo zokubukela iibhere eCanada
Kukho iindidi eziphilayo zeebhere ezisi-8 ezifumaneka kumazwekazi aseMntla Melika, eMzantsi Melika, ...
Iiphiramidi ezinkulu eYiputa
Idume kwihlabathi liphela, iiphiramidi zase-Egypt zezona ndawo zinomtsalane kubakhenkethi ezitsala amashumi amawaka ...
Ikorale ebomvu, isikhumbuzo seSardinia
Ikorale ebomvu, isikhumbuzo esidala esivela eSardinia
Iindawo ezininzi ezintle zokundwendwela eHolland
Kwixesha elidlulileyo, iNetherlands yayilelona lizwe lalinamandla amakhulu kwaye ngoku lelinye lawona mazwe anabantu abaninzi ...
Uhambo olungalibalekiyo ukuya kuMlambo iLena eSiberia
Ummandla omkhulu okude weSiberia osuka kumhlaba obandayo weArctic kuMntla wePole uye kwi ...
Izipho ezimnandi zokuthenga eSweden
Ngaba ucinga ngotyelelo eSweden? Okanye ngaba uhlala eSweden kwaye ufuna into yokuthumela ekhaya ...
Iinyani ezinika umdla malunga Golden Gate Bridge
Kukutsala kwebheyi laseSan Francisco. Hayi lilize ngo-1999 i-American Institute of Architects wamnika ...
Iindawo ezi-3 zokundwendwela eYiputa
IJiphutha ngumhlaba otshone kwimbali, uyenza indawo ephezulu yokundwendwela ...
Inuksuk, ii-monoliths zabantu base-Inuit
Ii-Inuksuk zizikhumbuzo zamatye amakhulu okanye ii-pilings ezisetyenziswa yi-Inuit, Inupiat, Kalaallit, Yupik, ...
Iidolophana zizele ngumtsalane eKrete
Uhambo olungalibalekiyo olusuka eAthene lusiya kwisiqithi saseKrete, akukho nto ilunge ngaphezu kokukhwela isikhephe ...